လွတ်လပ်ရေးနေ့ဟာဟူးလ်မှာလား - Netflix သတင်း
Is Independence Day Hulu
HOLLYWOOD, CA - ဇွန် ၂၀ ရက်၊ (L-R) သရုပ်ဆောင်များသည် Jessie Usher၊ Jeff Goldblum နှင့် Vivica A. Fox တို့သည် ၂၀ ရာစု Fox's 'Independence Day: Resurgence' ကို ၂၀၁၆ ဇွန်လ ၂၀ ရက်၊ California၊ Hollywood ရှိ TCL တရုတ်ပြဇာတ်ရုံတွင်ပြသခဲ့သည်။ (Kevin Winter / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Philadelphia တွင်အမြဲနေသာနေပြီး netflix ထွက်ခွာသည်
အလင်းရောင်ရာသီ ၂၊ အပိုင်း ၇ ပြန်လည်စုစည်းခြင်း - အဘယ်အရာကိုမျှမဖျက်ဆီးပါ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့တွင် Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန်မျိုးချစ်ရုပ်ရှင်ကား ၅ ခု
လွတ်လပ်ရေးနေ့ (သို့မဟုတ်) လွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုပြန်လည်မြင်တွေ့နိုင်ခြင်း - Hulu အပေါ်ပြန်လည်အသက်ဝင်ခြင်း ကံမကောင်းစွာပဲ, သင်တခြားနေရာကိုကြည့်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်!
၎င်းသည်ဇူလိုင်လ ၄ ရက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာလူတို့သည်လွတ်လပ်ရေးနေ့၊ ဇူလိုင်လ၏အချိန်အများဆုံးလူကြိုက်အများဆုံးစတုတ္ထမြောက်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
Hulu မှာရုပ်ရှင်ကောင်းတွေ၊ လူကြိုက်များတဲ့ရုပ်ရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲလွတ်လပ်ရေးနေ့နှင့်လွတ်လပ်ရေးနေ့နေ့ - ဇူလိုင်လ ၄ ရက်မှာ Hulu မှာပြန်လည်ထမြောက်ခြင်းပြန်မရရှိနိုင်ပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် Hulu Live မှတစ်ဆင့်လွတ်လပ်ရေးနေ့နှင့်ပြန်လည်ရှင်သန်မှုကိုစောင့်ကြည့်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ သငျသညျမကြားဘူးဆိုရင်အမှု၌, Hulu Live ကိုသင်တိုက်ရိုက်တီဗီကို streaming ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ Hulu ရဲ့တိုက်ရိုက် streaming ကိုဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးနေ့နေ့ကိုယခုအပတ်ပုံမှန်ကေဘယ်လ်တွင်မရရှိနိုင်ပါ။ ၎င်းသည် Starz၊ ပရီမီယံကေဘယ်ကွန်ယက်တွင်ရရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, Hulu အပေါ် Starz စောင့်ကြည့်ဖို့လမ်းမရှိသော။ Hulu အတွက် HBO add-on တစ်ခုရှိပေမယ့် Starz add-on မရှိပါ။ ဒါဟာ Hulu အပေါ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့လမ်းမရှိသောတော်တော်အံ့သြစရာပါပဲ။ HBO add-on, Hulu Live သို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းများမှတဆင့် Hulu ပေါ်ရှိရုပ်ရှင်၊ အထူးသဖြင့်မူလရုပ်ရှင်ကဲ့သို့သောအဟောင်းရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအမြဲတမ်းရှိသည်။ ဒါကဒီနှစ်အမှုမဟုတ်ပါဘူး။
ယခု HULU ကိုစာရင်းသွင်းပါ: တိုက်ရိုက် + လွှင့်ထုတ်ခြင်း။ ဒါဟာရုပ်မြင်သံကြားပြည့်စုံလာကြပါတယ်။
ဘာမှပြောင်းလဲမှုရှိမရှိသင်သိလိမ့်မယ်။ သင်လွတ်လပ်ရေးနေ့ဒါမှမဟုတ် Hulu မှာဒါမှမဟုတ် Hulu Live မှာနေ့မပြီးဆုံးခင်နောက်ဆက်တွဲနောက်ဆက်တွဲကိုကြည့်လို့ရလိမ့်မယ်။ ဆက်ပြီးနားထောင်ပါ!
Hulu မှာအခြားရုပ်ရှင်ကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ ၏စာရင်းထွက်စစ်ဆေးပါ Hulu မှာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် သင်ဇူလိုင်လ၏ဤစတုတ္ထကြည့်ဖို့တစ်ခုခုလိုအပ်မယ်ဆိုရင်။
ဖတ်ရမည်Hulu Timeless ကိုကယ်တင်တော်မူမည်လော
pll ရာသီ7premiere နေ့စွဲ
အင်ပါယာရာသီ2Premiere အချိန်
ဘယ်မှာမာယာ MC စီးဆင်းရန်